महिनावारी हुँदा स्वास्थ्यमा देखिने समस्या र समाधान ! - Samudrapari.com
महिनावारी हुँदा स्वास्थ्यमा देखिने समस्या र समाधान !
काठमाडौं – महिनाको एकपटक तीनदेखि चार-पाँच दिनसम्म गर्भाशयबाट रगत र केही कोषहरू बाहिर निस्किन्छन् । यसैलाई महिनावारी भएको भनिन्छ ।
युनिसेफको एक अध्ययनअनुसार साउथ एसियामा प्रत्येक तीनजना किशोरीमा एकजनालाई महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि यसबारे केही जानकारी नै हुँदैन । महिनावारी हुँदा महिलामा यस्ता समस्या देखिन सक्छः
-हाडजोर्नी दुख्ने ।
-पेट फुल्ने ।
-बान्ता हुने ।
-तल्लो पेट दुख्ने ।
-ढाड दुख्ने ।
-छिटो रिस उठ्ने, आत्तिने ।
नबिर्सनुस् यी कुरा
-सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने गरौँ ।
-नियमित नुहाउने गरौँ ।
-हिँडडुल र साधारण व्यायाम गरौँ ।
-प्रशस्त मात्रामा पौष्टिक आहार खाने गरौँ ।
-सफा कपडा तथा प्याडको प्रयोग गरौँ ।
-आराम गरौँ ।
-माछा, मासु, हरियो सागसब्जीलाई खानामा अधिक मात्रामा समावेश गरौँ । -एजेन्सी